Vonona ny hanafoana ny marketing Instagram anao? | Martech Zone
Talata, Janoary 20, 2015 Asabotsy 4 Febroary 2017 Douglas Karr
Izaho no voalohany hanaiky fa tsy mametraka fotoana be loatra amin'ny Vine, Instagram ary mizara sary amin'ny media sosialy aho. Te hanana izany aho, saingy mora kokoa ny manome tendrony amin'ny alàlan'ny lahatsoratra noho ny maka sary, manao famolavolana ary mizara zavatra iray izay misy dikany ihany, fa mahazo fifantohana bebe kokoa. Tsy maintsy mandray aho sary sy video an'ny alikako Gambino fa tsy… tiako ireo mpanaraka ahy!
Manantena aho fa hanova izany amin'ity taona ity. Tena tiako ny mampifantoka ny paikadintsika sy mampifanaraka azy ireo amin'ny fantsom-baovao rehetra. Na dia mampiasa fakan-tsary fotsiny aza ity fakako sary ity sary asongadin'ity lahatsoratra bilaogy zaraiko ity, azoko antoka fa afaka mahazo bebe kokoa noho ny selfie… na doggie io. Ary mifandraika kokoa amin'ny marika sy ny atiny izay anaovanay asa lehibe. Hanampy ireo toro-hevitra amin'ity infographic ity!
Ny mpanjifa ankehitriny dia miasa amin'ny sahan'afo haingana izay indraindray na ny Facebook aza tsy maharaka. Izany no antony maha-malaza be ny Instagram. Izay noheverin'ny maro taloha ho toy ny tranonkala fizarana sary fotsiny, dia lasa fitaovana marketing media sosialy lehibe izay afaka mamorona valiny tena izy ho an'ny marikao. Issa Asad
Miaraka amin'ny sary i Issa Asad dia manolotra ebook feno Tombom-barotra eo noho eo miaraka amin'ny Instagram Azo sintomina maimaim-poana izao.
Tags: marketing amin'ny saryInstagraminstagram marketingIssa Asadmarketing amin'ny masoWyzowl
21 Jan 2015 amin'ny 2:50 PM
Misaotra, Douglas amin'ny sary lehibe. Izaho koa dia tsy nandefa ny tranokalan'ny Instagram araka ny tokony ho izy ary tokony hanampy ahy hanomboka ahy izany.